Le webhusayithi iphethwe futhi iqhutshwa yiJudine Motors CC
IJudine Motors CC iyabuhlonipha ubumfihlo bakho futhi izibophezele ekuyivikeleni ngale Nqubomgomo Yobumfihlo.
Le Nqubomgomo Yobumfihlo ilawula ukufinyelela kwakho nokusetshenziswa kwe-judinemotors.co.za (“Iwebhusayithi”), kufaka phakathi noma yikuphi okuqukethwe, ukusebenza kanye nezinsizakalo ezinikezwa ku- "Website" noma, noma njengesivakashi noma umsebenzisi obhalisiwe.
Lapho ungena kwiWebhusayithi, iNkampani izofunda imininingwane ethile ngawe, ngokuzenzakalela nangezenzo zokuzithandela ongazithatha, ngesikhathi sokuvakasha kwakho. Le nqubomgomo isebenza kulwazi esiluqoqa kuWebhusayithi naku-imeyili, umbhalo, noma eminye imilayezo ye-elekthronikhi phakathi kwakho neWebhusayithi.
Sicela ufunde Inqubomgomo Yobumfihlo ngokucophelela ngaphambi kokuba uqale ukusebenzisa Iwebhusayithi. Ngokusebenzisa iWebhusayithi noma ngokuchofoza ukwamukela noma ukuvumelana Nemigomo Yokusetshenziswa lapho unikezwa le nketho, wamukela futhi uvume ukuboshwa futhi uthobele Inqubomgomo Yobumfihlo. Uma ungafuni ukuvumelana Nenqubomgomo Yobumfihlo, akufanele ungene noma usebenzise iWebhusayithi.
Imininingwane siyiqoqa ngawe
Lapho ungena kwiWebhusayithi, iNkampani izofunda imininingwane ethile ngawe ngesikhathi sokuvakasha kwakho.
Iwebhusayithi inikeza izindawo ezahlukahlukene zabasebenzisi zokunikeza imininingwane. Siqoqa imininingwane abasebenzisi abayinikezayo ngokugcwalisa amafomu kwiWebhusayithi, ukuxhumana nathi ngamafomu wokuxhumana, ukuphendula izinhlolovo, imibuzo yokucinga kusici sethu sokusesha, ukunikeza imibono noma eminye impendulo, nokunikeza imininingwane lapho si-oda umkhiqizo noma insiza ngeWebhusayithi .
Sisebenzisa imininingwane osinikeza yona ukuletha umkhiqizo oceliwe kanye / noma insiza, ukuthuthukisa ukusebenza kwethu konke, nokukunikeza okunikezwayo, ukukhushulwa, kanye nolwazi.
Imininingwane Siqoqa Ngokuzenzakalela Kokuqoqwa Kwemininingwane
Njengoba udabula iWebhusayithi yethu, singasebenzisa ubuchwepheshe bokuqoqa idatha obuzenzakalelayo okubandakanya i-Google Analytics ukuqoqa imininingwane ethile mayelana nemishini yakho, izenzo zokuphequlula, namaphethini. Lokhu kuzofaka phakathi ulwazi olumayelana nendawo okuyo, iphethini yakho yethrafikhi ngewebhusayithi yethu, nanoma yikuphi ukuxhumana phakathi kwekhompyutha yakho neWebhusayithi yethu. Phakathi kwezinye izinto, sizoqoqa idatha ngohlobo lwekhompyutha oyisebenzisayo, ukuxhumana kwakho kwe-inthanethi, ikheli lakho le-IP, uhlelo lwakho lokusebenza, nohlobo lwesiphequluli sakho.
Ulwazi esiluqoqa ngokuzenzekelayo lusetshenziselwa idatha yezibalo futhi ngeke lufake imininingwane yomuntu siqu. Sisebenzisa le datha ukwenza ngcono iWebhusayithi yethu kanye neminikelo yethu yesevisi. Ukuze unikeze imininingwane yakho ngokuzithandela, amasistimu ethu azohlanganisa ulwazi oluqoqwe ngokuzenzakalela nolwazi lwakho lomuntu siqu.
UKUSETSHENZISWA kwamakhukhi namaphikseli
Ngokufana namanye amawebhusayithi ezentengiso, iwebhusayithi yethu isebenzisa ubuchwepheshe obujwayelekile obubizwa ngokuthi “amakhukhi” nezingodo zeseva ukuqoqa imininingwane yokuthi isayithi lethu lisetshenziswa kanjani. Imininingwane eqoqwe ngamakhukhi nezingodo zeseva ingafaka usuku nesikhathi sokuvakasha, amakhasi abukwayo, isikhathi esichithwe kusayithi lethu, namawebhusayithi avakashelwe ngaphambi nje nangemva nje kokwethu, kanye nekheli lakho le-IP.
Ikhukhi yidokhumende yombhalo encane kakhulu, evame ukufaka isikhombi esihlukile esingaziwa. Uma uvakashela iwebhusayithi, ikhompyutha yalelo sayithi icela ikhompyutha yakho imvume yokugcina leli fayela engxenyeni yediski yakho ekhethelwe amakhukhi. Iwebhusayithi ngayinye ingathumela ikhukhi layo kwisiphequluli sakho uma okuthandwa yisiphequluli sakho kukuvumela, kepha (ukuvikela ubumfihlo bakho) isiphequluli sakho sivumela kuphela iwebhusayithi ukufinyelela amakhukhi asevele eyithumele kuwe, hhayi amakhukhi owathumele amanye amasayithi .
Inkampani inelungelo lokusebenzisa okufana namakhukhi kwezobuchwepheshe, kufaka phakathi amaphikseli ezinkundla zokuxhumana. Lawa amaphikseli avumela amasayithi ezokuxhumana nabantu ukuthi akwazi ukulandelela izivakashi kumawebhusayithi angaphandle ukuze ahambisane nemiyalezo yokukhangisa abasebenzisi abayibonayo ngenkathi bevakashela leyo webhusayithi yezokuxhumana. Inkampani inelungelo lokusebenzisa lamaphikseli ngokuhambisana nezinqubomgomo zezingosi ezahlukahlukene zokuxhumana.
UKUSETSHENZISWA KWAMAKhukhi OKWESITHATHU
Okunye okuqukethwe noma izinhlelo zokusebenza, kufaka phakathi izikhangiso, ezikwiWebhusayithi zinikezwa izinkampani zangaphandle, kufaka phakathi abakhangisi, amanethiwekhi wesikhangiso namaseva, abahlinzeki bokuqukethwe, nabahlinzeki bohlelo lokusebenza. Laba bantu besithathu bangasebenzisa amakhukhi wedwa noma ngokuhlangana nama-web beacon noma obunye ubuchwepheshe bokulandelela ukuqoqa imininingwane ngawe lapho usebenzisa iwebhusayithi yethu. Imininingwane abayiqoqayo ingahle ihlotshaniswe nemininingwane yakho yangasese noma bangaqoqa imininingwane, kufaka phakathi imininingwane yomuntu, mayelana nemisebenzi yakho eku-inthanethi ngokuhamba kwesikhathi nakuwo wonke amawebhusayithi ahlukile nakwezinye izinsizakalo eziku-inthanethi. Bangasebenzisa lolu lwazi ukukunikeza ngezikhangiso ezisuselwa kuntshisekelo (zokuziphatha) noma okunye okuqukethwe okubhekiswe kukho.
Asibulawuli lobu buchwepheshe bokulandela ngomkhondo noma ukuthi bungasetshenziswa kanjani. Uma unanoma yimiphi imibuzo mayelana nesikhangiso noma okunye okuqukethwe okubhekiswe kukho, kufanele uxhumane nomhlinzeki onomthwalo wemfanelo ngqo.
Uma ukhetha ukuxhumana nathi nge-imeyili, singagcina okuqukethwe kwemiyalezo yakho ye-imeyili kanye nekheli lakho le-imeyili kanye nezimpendulo zethu. Sinikezela ngokuvikelwa okufanayo kulokhu kuxhumana ngogesi esikusebenzisayo ekugcineni imininingwane esiyitholile ku-inthanethi, ngeposi nangocingo. Lokhu kusebenza futhi uma ubhalisela iwebhusayithi yethu, ubhalisela noma yimaphi amafomu ethu usebenzisa ikheli lakho le-imeyili noma uthenga kule sayithi. Ngeminye imininingwane bheka izinqubomgomo ze-imeyili ezingezansi.
Sizibophezele ekugcineni ikheli lakho le-imeyili liyimfihlo. Asithengisi, asiqashisi, noma siqashise uhlu lwethu lokubhalisile kubantu besithathu, futhi ngeke sidalule ikheli lakho le-imeyili kunoma ngubani ovela eceleni ngaphandle kokuthi kuvunyelwe esigabeni esinesihloko esithi Ukudalulwa Kwemininingwane Yakho.
Sizogcina imininingwane oyithumela nge-imeyili ngokuya ngomthetho osebenzayo wenhlangano.
Ngokuhambisana noMthetho we-CAN-SPAM, wonke ama-imeyili athunyelwe evela enhlanganweni yethu azobeka ngokusobala ukuthi i-imeyili ivela kubani futhi anikeze nemininingwane ecacile yokuthi angaxhumana kanjani nomthumeli. Ngaphezu kwalokho, yonke imilayezo ye-imeyili izoqukatha nemininingwane emfushane yokuthi ungazisusa kanjani ohlwini lwethu lwamakheli ukuze ungatholi okunye ukuxhumana nge-imeyili okuvela kithi.
Ama-imeyili ethu ahlinzeka abasebenzisi ngethuba lokukhetha ukuthola ukuxhumana kithina nakwabalingani bethu ngokufunda imiyalo yokuzikhipha ohlwini etholakala ezansi kwanoma iyiphi i-imeyili abayithola kithi nganoma yisiphi isikhathi.
Abasebenzisi abangasafuni ukuthola incwajana yethu noma izinto zokwazisa bangakhetha ukuthola lokhu kuxhumana ngokuchofoza kusixhumanisi sokuzikhipha ohlwini e-mail.
INDLELA NOKUTHI SIQOKA ULWAZI
Inkampani iqoqa imininingwane yakho ukuze iqophe futhi isekele ukubamba kwakho iqhaza emisebenzini oyikhethayo. Uma ubhalisela ukulanda incwadi noma izinsizakusebenza, bhalisela i-newsletter yethu, futhi / noma uthenga umkhiqizo kithi, siqoqa imininingwane yakho. Sisebenzisa lolu lwazi ukulandela okuthandayo nokukugcina unolwazi ngemikhiqizo nezinsizakalo okhethe ukuzithola kanye neminye imikhiqizo ehlobene kanye / noma nezinsizakalo. Njengesivakashi sale Webhusayithi, ungazibandakanya nemisebenzi eminingi ngaphandle kokunikeza imininingwane yomuntu. Kulapho ufuna ukulanda izinsizakusebenza kanye / noma ukubhalisela izinsizakalo lapho kudingeka ukuthi unikeze imininingwane.
Uma ungaphandle kwe-European Union futhi ukhetha ukwamukela noma yiziphi izinsiza zamahhala, bamba iqhaza kunoma yiziphi izinhlelo zokuqeqesha zamahhala, bhalisela i-webinar, ubhalisele umcimbi obukhoma, ubhalise kumhlangano, noma uthenge noma yimiphi imikhiqizo ethengiswa yiNkampani kule Webhusayithi, sizokubhalisela ngokuzenzakalela ukuthola incwadi yezindaba yamahhala ye-imeyili. Uma ungafisi ukuthola le ncwajana, ungazikhipha ohlwini nganoma yisiphi isikhathi. Sifaka isixhumanisi "sokuzikhipha ohlwini" ezansi kwayo yonke i-imeyili esiyithumelayo. Uma kwenzeka unenkinga yokuzikhipha ohlwini lwababhalisile, ungathumela i-imeyili
ucela ukuzikhipha ohlwini lwama-imeyili azayo.
Uma uku-European Union futhi ukhetha ukuthola noma yiziphi izinsiza zamahhala, bamba iqhaza kunoma yiziphi izinhlelo zokuqeqesha zamahhala, bhalisela i-webinar, ubhalisele umcimbi obukhoma, ubhalise kumhlangano, noma uthenge noma yimiphi imikhiqizo ethengiswa yiNkampani kule Webhusayithi, sizokubhalisela ukuthola incwadi yethu yamahhala ye-imeyili uma uvuma ngayo. Uma ungafisi ukuthola le ncwajana, ungazikhipha ohlwini nganoma yisiphi isikhathi. Sifaka isixhumanisi "sokuzikhipha ohlwini" ezansi kwayo yonke i-imeyili esiyithumelayo. Uma kwenzeka unenkinga yokuzikhipha ohlwini lwababhalisile, ungathumela i-imeyili
SILUSEBENZISA KANJANI ULWAZI OLETHULA KITHI?
Sisebenzisa imininingwane yakho ngenhloso yokwethula iwebhusayithi yethu nokuqukethwe kuyo, sikunikeze imininingwane, sikunikeze ngemikhiqizo nezinsizakalo, sikunikeze imininingwane mayelana nokubhaliselwe kwakho nemikhiqizo, senza noma yisiphi isivumelwano phakathi kwakho neNkampani, ukuphatha imisebenzi yethu yebhizinisi, ukuhlinzeka ngemisebenzi yamakhasimende, nokwenza ezinye izinto nezinsizakalo zitholakale kumakhasimende ethu nakubathengi abazoba khona.
Ngokuhamba kwesikhathi, singasebenzisa imininingwane osinikeza yona ukwenza izipesheli zokuthenga imikhiqizo nezinsizakalo ezinikezwa abantu besithathu ukuze sikhokhelwe ikhomishini ngabantu besithathu abanjalo. Uma kwenzeka ukhetha ukubamba iqhaza kulokhu kukhushulwa, abantu besithathu bazothola imininingwane yakho.
Ngezikhathi ezithile, singasebenzisa imininingwane osinikeza yona ukubonisa izikhangiso kuwe ezihambelana nezici zakho, izinto ozithandayo, nemisebenzi yakho.
UKUDALULA ULWAZI LWAKHO
Njengomthetho ojwayelekile, asithengisi, asiqashisi, asiqashisi noma asithumeli noma yimiphi imininingwane eqoqwe noma ngabe izenzekele noma ngesenzo sakho sokuzithandela.
Singadalula imininingwane yakho yangasese kubasizi bethu, abaxhumana nathi, kanye nabahlinzeki bezinsizakalo ngenhloso yokunikeza izinsizakalo zethu kuwe.
Singadalula imininingwane yakho yangasese kumuntu wesithathu, kufaka phakathi ummeli noma i-ejensi yokuqoqa, lapho kunesidingo sokuphoqelela imigomo yethu yesevisi noma esinye isivumelwano phakathi kwakho neNkampani.
Singanikezela ngemininingwane yakho kunoma imuphi ozongena esikhundleni sakhe ngentshisekelo uma kwenzeka kuhlangana, ukuhlukaniswa kabusha, ukuhlelwa kabusha, ukuhlelwa kabusha, ukuchithwa, noma okunye ukuthengiswa noma ukudluliswa kwezinye zezimpahla zeNkampani kanye / noma ibhizinisi.
Singadalula imininingwane lapho siphoqeleke ngokomthetho ukuthi sikwenze lokho, ngamanye amazwi, lapho thina, ngokwethembeka okuhle, sikholwa ukuthi umthetho uyayidinga noma ukuvikela amalungelo ethu asemthethweni noma lapho kuphoqelelwa yinkantolo noma enye inhlangano kahulumeni ukwenza lokho.
SIYIVIKELA KANJANI IMINININGWANE YAKHO NOKUVIKELWA KWEMINININGWANE YOLWAZI?
Sisebenzisa izindlela ezifanele ukuhweba ukuqinisekisa ukuphepha kolwazi osinikeza lona nolwazi esiluqoqa ngokuzenzekelayo. Lokhu kufaka phakathi ukusebenzisa izivumelwano ezijwayelekile zokuphepha nokusebenza kuphela nabathengisi abahloniphekile abavela eceleni. I-imeyili ayibonwa njengendlela yokuxhumana ephephile. Ngalesi sizathu, sicela ukuthi ungathumeli imininingwane eyimfihlo kithi nge-imeyili. Noma kunjalo, ukwenza kanjalo kuvunyelwe, kepha ngokuzibeka wena engcupheni. Olunye ulwazi ongalufaka kuwebhusayithi yethu ludluliselwa ngokuphepha ngomuntu ovikelekile owaziwa ngokuthi yi-Secure Sockets Layer, noma i-SSL. Imininingwane yekhadi lesikweletu neminye imininingwane ebucayi ayidluliswa nge-imeyili.
Inkampani ingasebenzisa izinhlelo zesoftware ukwenza izibalo ezifingqiwe, ezisetshenziselwa izinhloso ezifana nokuhlola inani lezivakashi ezingxenyeni ezahlukahlukene zesayithi lethu, yiluphi ulwazi olubaluleke kakhulu, olunquma ukucaciswa komklamo wobuchwepheshe, nokuhlonza ukusebenza kohlelo noma izindawo eziyinkinga.
Ngezinjongo zokuphepha kwesiza nokuqinisekisa ukuthi le sevisi ihlala itholakala kubo bonke abasebenzisi, iNkampani isebenzisa izinhlelo zesoftware ukuqapha ithrafikhi yenethiwekhi ukukhomba imizamo engagunyaziwe yokufaka noma yokushintsha imininingwane, noma kungenze umonakalo.
Kuyinqubomgomo yethu ukuthumela noma yiziphi izinguquko esizenzayo kunqubomgomo yethu yobumfihlo kuleli khasi. Uma senza izinguquko ezibonakalayo endleleni esiluphatha ngayo ulwazi lomuntu siqu lwabasebenzisi bethu, sizokwazisa nge-imeyili kukheli le-imeyili elicaciswe ku-akhawunti yakho kanye / noma ngesaziso esisekhasini lasekhaya leWebhusayithi. Usuku inqubomgomo yobumfihlo egcine ukubuyekezwa ngalo lukhonjwa ezansi kwekhasi. Unesibopho sokuqinisekisa ukuthi sinekheli le-imeyili elisebenzayo nelinikezwayo lakho, futhi ngokuvakashela iWebhusayithi yethu futhi nale nqubomgomo yobumfihlo ngezikhathi ezithile ukuhlola noma yiziphi izinguquko.
AMALUNGELO E-GDPR YESIHAMBILI
Uma ungaphakathi kwe-European Union, unelungelo lokuthola imininingwane ethile futhi unamalungelo athile ngaphansi kwe-General Data Protection Regulation.
Lawo malungelo afaka:
Sizogcina noma yiluphi ulwazi okhetha ukusinikeza lona kuze kube ngaphambi kwalokhu: (a) usicela ukuthi sisuse imininingwane, (b) isinqumo sethu sokuyeka ukusebenzisa abahlinzeki bethu bemininingwane abakhona, noma (c) iNkampani ithathe isinqumo sokuthi inani lokugcina idatha lidlulwa izindleko zokuligcina.
Unelungelo lokucela ukufinyelela kwimininingwane yakho egcinwa yiNkampani kanye namalungelo wokulungisa noma okusula imininingwane yakho.
Unelungelo lokufuna imikhawulo ekusebenzeni kwedatha yakho.
Unelungelo lokuphikisa ukucutshungulwa kwedatha yakho kanye nelungelo lokuphatheka kwemininingwane yakho.
Uma unikeze imvume ekusebenzeni kweNkampani ngemininingwane yakho, unelungelo lokuhoxisa leyo mvume nganoma yisiphi isikhathi, ngaphandle kokuthinta ukuba semthethweni kokucutshungulwa kususelwa kwimvume eyenzeke ngaphambi kokuhoxiswa kwemvume.
Unelungelo lokufaka isikhalazo kuziphathimandla zokuphatha ezinamandla okuphatha izindaba ezithinta i-General Data Protection Regulation.
Sidinga kuphela imininingwane edingeka ngokufanelekile ukungena esivumelwaneni nawe. Ngeke sidinge ukuthi unikeze imvume nganoma yikuphi ukucubungula okungadingekile njengesimo sokungena esivumelwaneni nathi.
Iwebhusayithi yethu ayenzelwe izingane ezingaphansi kweminyaka engu-13. Akekho umuntu oneminyaka engaphansi kwengu-13 onganikeza noma yiluphi ulwazi ku-Website. Asiqoqi ngamabomu imininingwane yomuntu siqu ezinganeni ezingaphansi kweminyaka engu-13. Uma uneminyaka engaphansi kwengu-13, ungasebenzisi noma unikeze noma yiluphi ulwazi olukule webhusayithi noma ngokusebenzisa noma yiziphi izici zalo / irejista kwiWebhusayithi, wenze noma yikuphi ukuthenga ngeWebhusayithi, sebenzisa noma yiziphi izici zokuxhumana noma zokuphawula zomphakathi zale Webhusayithi noma zinikeze noma imiphi imininingwane mayelana nawe kithi, kufaka phakathi igama lakho, ikheli, inombolo yocingo, ikheli le-imeyili, noma yiliphi igama lesikrini noma igama lomsebenzisi ongalisebenzisa.
Uma sithola ukuthi siqoqe noma sathola imininingwane yomuntu siqu enganeni engaphansi kweminyaka engu-13 ngaphandle kokuqinisekiswa kwemvume yomzali, sizoyisusa leyo mininingwane. Uma ukholwa ukuthi singaba neminye imininingwane enganeni noma engaphansi kwengu-13, sicela uxhumane nathi ku info@judinemotors.co.za.
Uyacelwa uqaphele ukuthi ezinye izixhumanisi ezikule webhusayithi ziyizixhumanisi ezihambisanayo, futhi ngaphandle kwezindleko ezingeziwe kuwe, ngizothola ikhomishini uma uthatha isinqumo sokuthenga. Ngicela niqonde ukuthi nginolwazi lwazo zonke izinkampani engizishoyo, futhi ngiyazincoma ngoba ziwusizo futhi zilusizo, hhayi ngenxa yamakhomishini amancane engiwenzayo uma unquma ukuthenga okuthile. Sicela ungasebenzisi mali kule mikhiqizo ngaphandle uma ubona ukuthi uyayidinga noma ukuthi izokusiza ukufeza izinhloso zakho.
IJudine Motors CC yemukela imibuzo noma imibono yakho maqondana nenqubomgomo yobumfihlo:
Judine Motors CC C / O Rietfontein & Bass Street, Boksburg West,
IGauteng, iNingizimu Afrika